LISITRY NY KARAZANA ALIKA MITIFITRA - ALIKA
Lisitry ny karazana alika mitifitra
Fotoana Yakutian alika misarika sled - Sary nahazoana alàlana avy amin'i El Flaum Kennel any Novosibirsk, Russia
Alika Eskimo Kanadiana (na Qimmiq)
Eurohound (ilaina ny sary)
Mackenzie River Husky (ilaina ny sary)
Seppala Siberian Sled alika
Shane ilay vehivavy Siberia Husky, 6 taona eo ankavia ary i Marco ilay lehilahy Alaskan Malamute, 18 volana eo ankavanany— 'Ny alika roa dia avy amin'ny toerana famonjena. Manana karazany roa hafa koa aho. Samy mavitrika be izy roa ireo, saingy matetika ihany fandehanana fohy nandritra ny fahavaratra mafana be tany Hong Kong. Tian'izy ireo ny valan-javaboary amin'ny ririnina! Na dia manana toetra miavaka amin'ny alika hafa aza i Marco, dia sariaka be amin'ny olona izy. Shane dia saro-kenatra amin'ny olon-tsy fantatra, tia milalao tosika amin'ny tadin-dokanga, ary manomboka milalao ady be amin'i Marco na dia indroa lanja aza (25 vs. 42 kg) izy. Tsy niofana tanteraka i Marco rehefa tonga tamin'ny 1 taona. Naharitra 3 ka hatramin'ny 4 volana ny fampivoarana azy ho olom-banona, ary mendrika izany ezaka izany. Fantatro haingana fa mamaly tsara izy fiderana , ary mahantra amin'ny nibedy izany no lakilen'ny fandrosoany. '
Havia sy havanana:
'Dream dia 3 taona amin'ity sary ity. Mainty izy (Siberian Husky). Rehefa nividy azy izahay dia nilaza taminay izy fa karazana Siberian Husky manokana izy, 'Sport Husky,' mety ho an'ny asa mafy, toy ny alika sled. Mitovy amin'i Laska ny fihetsiny, saingy tsy mahaleo tena izy ary tia antsika kokoa. Mety ho Husky Alaskan izy ... '
'Laska ao amin'ny 10 taona dia Siberia Husky fotsy sy mainty. Mbola tanora izy, milalao, indraindray manandrana mivovo (aleony midradradradra), ary izy no mpitarika ny kitapon'ny alika. '
'Winnie dia Alaskan Malamute mainty sy fotsy fotsy, mety mifangaro amin'i Husky sy ny singa faralahy ao amin'ilay vondrona. Tsy manam-paharoa ny masony ... volontsôkôlà iray ary manga iray fotsy misy teboka volontany ... mahafinaritra. Somary maditra izy, izy tia rano , milomano ary 'manaikitra' rano. '
'Winnie ilay alina fotsy mainty sy fotsy amin'ny 4 taona (aseho etsy ambony toy ny alika kely) dia matanjaka sy mahafinaritra ary mahira-tsaina. Tiany ny rano, mandro ary tiany ny lanezy. Alika mpiambina tsara izy ary izy irery no alika hiaro ny tranonay. '
'Daisy, fotsy volondavenona Husky Siberia , ary Dream, zanako mainty sy fotsy fotsy 6 taona Alaskan Husky . dia haingana be, tsy reraka ary somary wild. Tian'izy ireo ny mihaza saka, voalavo, vorona ary izay biby kely hitan'izy ireo! '
'Misty ilay alika sleda misotro ronono avy any Alaska milalao miaraka amin'i Rikki the Siberian Husky.'
Rikki (ankavia), a Husky Siberia aseho eto amin'ny 8 1/2 volana miaraka amin'i Moose (ankavanana), a Malamute / Husky mix (Alusky) amin'ny 5 taona.
'Misty no alika retra efa nisotro ronono avy any Alaska aseho eto amin'ny faha-7 taonany.'
Misty (miverina) ilay alika salama fisotroan-dronono avy any Alaska tamin'ny faha-7 taonany, Moose (afovoany) ny Malamute / Husky mix (Alusky) tamin'ny 5 taona, Rikki (anoloana) ny Husky Siberia amin'ny 8 1/2 volana
Husky Dogs: sary an-tsokosoko voaangona
Hizaha lisitra feno anisan'izany ny fitsidihana hybrides Ny purebrita sy ny fiompiana rehetra
Lisitry ny alika madiodio
A hatramin'ny Z - Taranaka alika
Fikarohana alika isaky ny sokajy
Mikaroha ny karazany rehetra amin'ny pejy iray
Karazan'alika: mbola tsy miorina sy / na dingana samihafa amin'ny fampandrosoana
mpiandry ondry aostraliana sy fifangaroan'ny sheltie
kilalao fox terrier shih tzu mifangaro
alika milanja 50 pounds
karazana alika izay toa coyotes